အိမ် for Rent Near Me - FazWaz.com.mm
အိမ်များ for Rent Near Me
・FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 291 အိမ်များ
Virtual 3D tours of မြန်မာ အိမ်များ
Turn on this filter to only view အိမ်များ with 3D virtual tours!
Don't miss out! Get notified when new အိမ်များ are listed တွင် မြန်မာ
We offer the best prices and price match on all အိမ်များ တွင် မြန်မာ
သင့်အတွက် 258 အိမ်များ
သင့်အတွက် 14 အိမ်များ
သင့်အတွက်5အိမ်များ
သင့်အတွက်2အိမ်များ
သင့်အတွက် 1 အိမ်များ
မြန်မာ တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 43 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in မြန်မာ is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာ တွင် 283 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
အိမ် အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ3အိပ်ခန်းများ (38 အိမ်များကြည့်ပါ) 37 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (83 အိမ်များကြည့်ပါ) 47 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (55 အိမ်များကြည့်ပါ) 61 သိန်း6အိပ်ခန်းများ (32 အိမ်များကြည့်ပါ) 85 သိန်း7အိပ်ခန်းများ (25 အိမ်များကြည့်ပါ) 84 သိန်း
258 အိမ်များ ရရှိနိုင်သော
14 အိမ်များ ရရှိနိုင်သော
5 အိမ်များ ရရှိနိုင်သော
2 အိမ်များ ရရှိနိုင်သော
1 အိမ် ရရှိနိုင်သော